Bit By Bit - မေးမေးခွန်းတွေကို - 3.3.2 တိုင်းတာခြင်း
စုစုပေါင်းစစ်တမ်းအမှားမူဘောင်၏ဒုတိယအမျိုးအစားတိုင်းတာခြင်းဖြစ်၏ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဖြေဆိုသူကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုပေးသောအဖြေကိုမှယူဆချက်များစေနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုအတူဆကျဆံ။ ဒါဟာကျနော်တို့ခံယူအဖြေကို, ကျနော်တို့လုပ်ထို့ကြောင့်ယူဆချက်များ, ဝေဖန်နှင့်မှီခိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်အံ့အားသင့်စရာနည်းလမ်းများ-အပေါ်ကျနော်တို့မေးမြန်းအတိအကျဘယ်လောက်ရှိနိုင်သည်ကိုထွက်လှည့်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဘာမှမ-Norman Bradburn, Seymour Sudman နှင့်ဘရိုင်ယန် Wansink အားဖြင့်မေးခွန်းလွှာမေးအံ့ဖွယ်စာအုပ်အတွက်ဟာသတစ်ခုထက်ပိုကောင်းဤအရေးကြီးသောအချက်သရုပ်ဖော် (2004) :
နှစ်ဦးယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဦးဒိုမီနီကန်နှင့်တစ်ဦးဂျပန်သို့ကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းရန်သူသည်အပြစ်ရှိ၏ရှိမရှိဆွေးနွေးကြတယ်။ တစ်နိဂုံးရောက်ရန်ပျက်ကွက်ပြီးနောက်, အသီးအသီးမိမိအအသီးသီးမှသာလွန်တိုင်ပင်ဖို့ပယ်တတ်၏။ ဒိုမီနီကန် "သင်၏သာလွန်ဆိုပွုခဲ့ဘာလဲ" ဟုဆို
အဆိုပါဂျပန်သို့တုံ့ပြန်, "သူကပွင်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ "
ဒိုမီနီကန်ပြန်ကြားချက်ကို "ဒါကရယ်စရာရဲ့", "ငါ၏အကြီးကြပ်ရေးမှူးအပြစ်ဖြေရာကပြောပါတယ်။ "
အဆိုပါဂျပန်သို့ "သင်သူ့ကိုဘာမေးခဲ့သနည်း" ဟုဒိုမီနီကန်, ပြန်ဖြေတယ်, "ဟုဆုတောငျးလစဉ်ကြောင့်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ပွင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါသူ့ကိုမေးခဲ့တယ်။ " ဒါကြောင့်ဆေးလိပ်စဉ်ဆုတောင်းရန် OK ကိုကြီးလျှင် "အိုး" ဟုဂျပန်သို့ကပြောပါတယ်, "ငါမေး၏။ "
နှစ်ခုယဇ်ပုရောဟိတ်အားဖြင့်ကြုံတွေ့တတူကွဲလွဲချက်များအများအပြားဥပမာရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ဒီဟာသရဲ့အမြစ်မှာအလွန်ပြဿနာစစ်တမ်းသုတေသနလုပ်ငန်းရပ်ရွာထဲတွင်နာမည်တစ်ခုရှိပါတယ်: မေးခွန်းပုံစံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (Kalton and Schuman 1982) ။ မေးခွန်းပုံစံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမှန်ကန်စစ်တမ်းများ impact စေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုကြည့်ဖို့, အဲဒီနှစ်ဦးဟာအလွန်ဆင်တူရှာဖွေနေစစ်တမ်းမေးခွန်းတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား:
"ဘယ်လောက်သင်အောက်ပါကြေညာချက်နှင့်အတူသဘောတူကြဘူး: ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤတိုင်းပြည်တွင်ရာဇဝတ်မှုနှင့်မတရားမှုအဘို့လူမှုရေးအခြေအနေများကိုထက်အပြစ်တင်ဖို့ကပိုရှိပါတယ်။ "
"ဘယ်လောက်သင်အောက်ပါကြေညာချက်နှင့်အတူသဘောတူကြဘူး: လူမှုအခွအေနဒီတိုင်းပြည်အတွက်ရာဇဝတ်မှုနှင့်မတရားမှုအဘို့အဦးချင်းစီထက်အပြစ်တင်ဖို့ကပိုရှိပါတယ်။ "
နှစ်ဦးစလုံးမေးခွန်းများကိုတူညီတဲ့အရာတိုင်းတာရန်ပေါ်လာပေမယ့်သူတို့တစ်တွေအမှန်တကယ်စစ်တမ်းစမ်းသပ်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုထုတ်လုပ် (Schuman and Presser 1996) ။ တလမ်းတည်းမေးတဲ့အခါ, ဖြေဆိုသူ 60 ခန့်% တစ်ဦးချင်းစီရာဇဝတ်မှုများအတွက်အပြစ်တင်ဖို့ပိုခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်ဒါပေမယ့်အကြောင်း 60% လူမှုရေးအခြေအနေများကို (ပုံ 3.2) အပြစ်တင်ဖို့ပိုခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်သည်အခြားလမ်းဟုမေးသောအခါ။ တနည်းအားဖြင့်နှစ်ဦးမေးခွန်းတွေကိုအကြားငယ်လေးခြားနားချက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနိဂုံးမှသုတေသီတွေကဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။
စစ်တမ်းတစ်ခုစမ်းသပ်မှုကနေရလာဒ်: 3.2 ပုံ (Schuman and Presser 1996, Table 8.1) ။ သုတေသီတွေကသူတို့မေးခွန်းမေးခဲ့တယ်အတိအကျဘယ်လောက်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောအဖြေကိုရရှိနိုင်သည်။ ဒါကမေးခွန်းပုံစံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် (Kalton and Schuman 1982) ။
မေးခွန်းများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပြင်, ဖြေဆိုသူလည်းအသုံးပြုတဲ့တိကျတဲ့စကားလုံးမြားအပျေါအခွခေံကွဲပြားခြားနားသောအဖြေကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အစိုးရမဟုတ်သောဦးစားပေး ပတ်သက်. ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုတိုင်းတာနိုင်ရန်အတွက်, ဖြေဆိုသူအောက်ပါ prompt ကိုဖတ်ခဲ့ကြသည်:
"ကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူသို့မဟုတ်စျေးသက်သာစွာဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်အဘယ်သူအားမျှသောအဒီတိုင်းပြည်အတွက်ပွဿနာမြားစှာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည်။ ငါဒီပြဿနာတွေကိုအချို့ကိုအမည်ကိုသွား, ငါသင်ကျွန်တော်အပေါ်အလွန်အကျွံပိုက်ဆံဖြုန်းနေတဲ့ထင်ရှိမရှိလည်းနည်းနည်းပိုက်ဆံငါ့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်အသီးအသီးအဘို့, သို့မဟုတ်ညာဘက်ငွေပမာဏနှင့် ပတ်သက်. တာပါ။ "
ထို့နောက်ဖြေဆိုသူထက်ဝက်အကြောင်းမေးခဲ့ကြ "လူမှုဖူလုံရေး" နှင့်တစ်ဝက်အကြောင်းမေးခဲ့ကြသည်ဤကဲ့သို့တူညီသောအရာနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောစာပိုဒ်တိုများထင်နေချိန်တွင်, သူတို့ကအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရလာဒ်များ (ပုံ 3.3) ရူးနှမ်း "ဟုအဆိုပါဆင်းရဲသားများအတွက်အကူအညီ။ "; အမေရိကန်တွေ "လူမှုဖူလုံရေး" ထက်အများကြီးပိုအထောက်အကူ "ဆင်းရဲသားကိုမှအကူအညီပေးရေး" ၏ဖြစ်ခြင်းသတင်းပို့ (Smith 1987; Rasinski 1989; Huber and Paris 2013) ။ စစ်တမ်းသုတေသီများသည်ဤအသုံးအနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများကွဲလွဲချက်များဖြစ်ကိုစဉ်းစားနေချိန်တွင်, သူတို့ကလည်းသူတို့ကိုတွေ့ရှိချက်သုတေသနပြုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်။ ဒါကကျနော်တို့ကဒီရလဒ်ကနေလူထုအမြင်နှင့် ပတ်သက်. အရာတစ်ခုခုကိုလေ့လာသိရှိကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
မှရလဒ်များ: 3.3 ပုံ Huber and Paris (2013) ။ ဖြေဆိုသူအများကြီးပိုအထောက်အကူ "ဆင်းရဲသောသူကိုမှအကူအညီပေးရေး" ၏ထက်မျ​​ားမှာ "လူမှုဖူလုံရေး။ " သုတေသီတွေကခံယူသောအဖြေကိုအတိအကျသောသူတို့မေးခွန်းများကိုသုံးစကားလုံးများကိုအပေါ်မူတည်မထွက်ရဒါကမေးခွန်းအသုံးအနှုန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းပုံစံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အသုံးအနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ဤဥပမာကိုပြသသည့်အတိုင်းသုတေသီများကခံယူသောအဖြေကိုသူတို့မေးခွန်းတွေကိုမေးမြန်းပုံကိုအပေါ်အခြေခံပြီးသိမ်မွေ့နည်းလမ်းများအတွက်လွှမ်းမိုးမှုနိုင်ပါသည်။ ဒီစစ်တမ်းများမသုံးသင့်ကြောင်းမဆိုလိုပါ; မကြာခဏအဘယ်သူမျှမရှေးခယျြမှုလည်းရှိ၏။ အဲဒီအစားဥပမာကျနော်တို့ဂရုတစိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုတည်ဆောက်သင့်ပါတယ်ကျွန်တော် uncritically တုံ့ပြန်မှုလကျမခံသငျ့ကွောငျးဖျောပွ။
အများစုမှာအခိုင်အမာ, ဤသူသည်သင်တို့တစ်စုံတစ်ဦးကစုဆောင်းစစ်တမ်းဒေတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာလျှင်, သင်အမှန်တကယ်မေးခွန်းလွှာဖတ်ပြီသေချာအောင်ဆိုလိုသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မေးခွန်းလွှာဖန်တီးခြင်းကြသည်လျှင်, ငါသည်သုံးအကြံပြုချက်များရှိသည်။ ပထမဦးစွာငါသည်သင်တို့မေးခွန်းလွှာဒီဇိုင်း (ဥပမာ, အကြောင်းပိုမိုဖတ်အကြံပြု Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) ); ငါကဒီမှာကိုဖော်ပြရန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးထက်ကပိုပြီးလည်းရှိ၏။ ဒုတိယအချက်မှာငါသည်သင်တို့ကိုအရည်အသွေးမြင့်စစ်တမ်းများမှစကားလုံး-မေးခွန်းတွေကိုအဘို့အ-စကားလုံး copy ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီ plagiarism ကဲ့သို့မြည်ပေမယ့်, ကူးယူခြင်းမေးခွန်းများကို (နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်မူရင်းစစ်တမ်းကိုကိုးကားပြီးကဲ့သို့) စစ်တမ်းသုတေသနတွင်အားပေးအားမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအရည်အသွေးမြင့်စစ်တမ်းများကနေမေးခွန်းတွေကိုကော်ပီကူးလျှင်, သင်သူတို့စမျးသပျခဲ့ကြခြင်းနှင့်အချို့ကိုသင်အခြားစစ်တမ်းမှတုံ့ပြန်မှုရန်သင့်စစ်တမ်းမှတုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ကြောင်းသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါသည်သင်တို့၏ frame ကိုလူဦးရေကနေလူတချို့အားဖြင့်သင်တို့ကို pre-ကိုစမ်းသပ်သင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုအကြံပြု (Presser et al. 2004) ; အကြှနျုပျ၏အတှေ့အကွုံကို pre-testing ကိုအမြဲအံ့သြစရာကိစ္စများထုတ်ဖော်ပြသသည်။